Fedhii dabalaa jiruu fi hir'inni omishaa, gatii boba'aa %3 dabale - BBC News Afaan Oromoo
Fedhii dabalaa jiruu fi hir'inni omishaa, gatii boba'aa %3 dabale
Gatii boba'aan torban kana dabalees, kana waggoota lamaan darbaniin oliitti mul'ate caaluun galmaa'eera.
Hir'isuu omisha boba'aa miseensoota Opec dabalate, guddinni fedhii fi yaaddoon siyaasaa naannoo dabala gatii kanaafa gummaataniiru.
Madaallii Birentiin barmeelli tokko percantaa 3.8 n dabaluun dolaara 59.02 kan qaqabee yoo ta'u, erga Adoolessa 2015 wayita madaalliin lixa Teksaas Ameerikaa %3 dabaluun doolaara 52.22 irra itti qaqqabee kaasee kun olaanaadha jedhameera.
Gabaan boba'aa gara waggoota sadiitiif gadi bu'aa deemaa tureera.
Guddachuu fedhii Chaayinaan boba'aaf qabdu dabalatee, gochi Turkiin sochii boba'aa naannoo Kuridii Iraaqi keessaa dhufuu jeequuf taasiftu gatiin bob'aa Wiixata akka olka'uuf gummaateera.
Riifarndamii walabummaa naannoo Kurdishi ofiin ofi bulchuuf dhiyaaterratti dhiibbaa taasisuuf jecha, Turkiin ijummoo boba'aa Iraaqi kaabaatii gara gabaa addunyaatti geessuu kutu akka dandeessu dubbatee turte.
Kana malees, biyyoonni boba'aa eergan, Raashiyaa fi biyyooonni kan biraas, bara 2017 irraa kaasuun guyyaatti omisha barmeela 1.8 hirisuun isaanii gatiin boba'aa ji'oota sadan darban keessa %15n akka dabaluuf gargaareera.
Waligahii biyyoota boba'aa eerganii kan Jimaataa irrattis, biyyoonni baayyeen omisha xiqqeessuun gabaa fi gatii barbaadamu fidaa jira jedhaniiru.
Ministirri Boba'aa Kiweet Essaam al-Maarzuqii gama isaatiin, hirisuun kunis kusaan boba'aa hincalalamiin gara jiddu gala waggoota shanii kan biyyoonni boba'aa erganii kiyyeefataniitti gadi buuseera jedhe.
Biyyoota boba'aa omishanii fi eergan
Value of Scottish North Sea oil and gas rises by 15.2%
13 Fuulbana 2017